Le misebenzi iyingxenye yemisebenzi eyimidwebo eyingxenye yeziqu ze-EECE eziyiminyaka emine futhi isebenza njengesivivinyo sekhono lokusebenza komfundi ngamunye njengonjiniyela wemidwebo.
UMholi Wezokufunda kweze-EECE, uDkt Leigh Jarvis, uthe, ‘Ikhono lokwazi ukwakha okusha kusetshenziswa ezokudweba ikhono elibalulekile kunjiniyela. Lolu suku oluvulelekile lukhangisa ngamakhono abafundi bethu okudweba ukuze kusombululwe izinkinga ezibucayi zobunjiniyela futhi kuyindlela yokubakhulisa’.
Imisebenzi ibihlolwa yiqoqo longoti bangaphandle futhi nabaphumelele bamenyezelwa ekupheleni kosuku.
U-Joshua Piggott udle umhlanganiso esigabeni soNjiniyela Odweba ngeKhompyutha, u-Saiuree Nayager wanqoba esikaNjiniyela Kagesi, kwathi u-Rivania Maharaj wanqoba esikaNjiniyela Womdwebomfanekiso KaGesi.
Eminye imisebenzi ebihlaba umxhwele ebikhangisiwe ihlanganise okuyinsiza yokufunda umbhalo uphimiswe ngamazwi osiza abanenkinga yokubona, irobhothi elihlola ugesi, okuyinsizakuxhumana okungenantambo kokuhlangula abantu olwandle nerobhothi i-hexapod.
Amagama: ngu-Sejal Desai